Bangiga Adduunka oo amaah siiyay awoodda tamarta ee Kenya iyo Itoobiya - Sabahionline.com
Bangiga Adduunka oo amaah siiyay awoodda tamarta ee Kenya iyo Itoobiya
Bangiga Adduunka ayaa Khamiisti (12-ki Juulaay) ogolaaday dayn dhan 684 milyan oo doolar oo la siinayo Kenya iyo Itoobiya, si loogu maal-galiyo xoog koronto oo xudduudaha isaga tallaaba.
Baanka Adduunka oo daynta uu siiyo Kenya kordhinaya 10 boqolkiiba
Faransiiska oo Kenya amaahiyay 98.1 milyan oo doolar si loogu dhiso khadadka korontada
Baanka Adduunka oo saadaalinaya in uu kobco dhaqaalaha Kenya, boorrinayana ganacsi heer gobol ah oo dheeraad ah
Mashruuca cusub ee East Electricity Highway ayaa waxaa ku bixi doona wajiga hore 1.3 bilyan oo doolar, oo ay ka faa'iidi doonaan 212 milyan oo qof oo ku kala nool shan waddan. Bangiga Horu-marinta Afrika, Hay'adda Horu-marinta ee Faransiiska, iyo dowladaha Itoobiya iyo Kenya ayaa sidoo kale maal-galin doon mashruuca.
"Mashruucan is-bedel ee taariikhiga ah waxa uu bedeli doonaa aasaaska tamarta ee Bariga Afrika," ayuu yiri Madaxweyne Ku-xigeenka Bangiga Aduunka ee Afrika Makhtar Diop. "Xiligan la joogo, saddaxdii qof ee Afrikaan ahba, hal qof ayaa hela korontada. sidaa daraadeed kordhinta qeybsashada korontada ee dalalka waa tallaabo muhiim ah oo loo qaaday la-falgalidda baahiyaha Afrika."
Itoobiya ayaa ka iibin doonta awooddeeda Kenya kadib marka la dhiso awoodda korontada, hadii loo baahdana arintaas waa la badli karaa mustaqbalka. Iskaashiga Horu-marinta Caalamiga ah, oo ah qeyb kamid ah Bangiga Adduunka ayaa Kenya ugu deeqi doonta 243 milyan oo doolar, halka Itoobiyana ay siin doonto 441 milyan oo doolar.
"Mashruuca Eastern Electricity Highway waxa uu si wayn uga qeyb qaadan doonaa caawinta horu-marka ay u baahan yihiin dadka Itoobiya, Kenya iyo gobolada hoos yimaada," ayuu yiri Jamal Saghir, Agaasimaha Bangiga Adduunka ee Horu-marinta Afrika. Muxuu kula yahay qoraalkan?
July 14, 2012 @ 04:11:23AM
Waa arrin horu-mar u ah dalalka bariga Afrika. Howl wacan ayaa la qabtay.